Shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee (I C G) oo magaalada Copenhegen lagu soo gabagabeeyay, lagana soo saaray qudubo muhiim ah. – Radio Daljir
Shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee (I C G) oo magaalada Copenhegen lagu soo gabagabeeyay, lagana soo saaray qudubo muhiim ah.
Copenhegen, Oct 01 – Waxaa magaalada Copenhagen ee dalka Demark lagu soo afjaray shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee (International Contect Group) kaasoo si wayn loogu falan-qeeyay habka dhaqaale loogu raadin lahaa mashaariicda lagu hormarinayo dawladda Soomaaliya.
Kulankaan oo ay ka qeyb-qateen masuuliyiin ka socota QM, Midawga Africa, madaxda (I C G) dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya, DFKS, Puntland, Galmudug, iyo Ahlu-suna, ayaa qoddo-fog looga hadlay arrimo badan uu quseeya Soomaaliya.
Shirku waxaa u si kulul u falanqeeyey arrimo ay ka mi yihiin, hirgalinta barnaamijka (Road Mapka) oo ah ka guurida marxaladda kumeel gaarka ah ee dalka, xaaladda abaarta ku dhufatay geeska Africa, gaar ahaan Soomaaliya, habka wax looga qaban karo kooxda burcad-badeedda Soomaaliyeed, dhawrida xaquuqul-insaanka iyo haweenka iyo sidoo kaleeto qodobo kale oo muhiim ah.
Shirkaan ayaa intii uu socday waxaa khudbado kale duwan kasoo jeedshay madaxda dawladda kumeel-gaarka ee Soomaaliya, iyo madaxda maamullada ka jira dalka Soomaaliya, iyadoo xaaladda Soomaaliya uu si faahfaahsan u cabbiray Dr. Mahiga ergiga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, waxaana dood dheer iyo wadahadal ka dib kasoo baxay shirkaasi qodobadaan.
1-In sida ugu dhaqsaha badan loo hirgaliyo barnaamijka ka guurida marxaladda kumeel-gaarka ah ee (Road Mapka).
2-In bulshada rayid-ka ah (Civil Society) laga qeyb-galiyo shirarka looga tashanayo arrimaha Soomaaliya.
3-In beesha caalamku ay taageero buuxda siiso nuxurka qodobadii kasoo baxay shirkii Moqdisho, taageeradaasina ay ku xiran tahay hirgalinta qorshe hawleedka horyaalla dawladda dhexe iyo maamuladii saxiixay hishiiskii Moqdisho lagu gaaray.
4-In dalka Soomaaliya loo sameeyo sanduuq dhagaale, si loogu taageero qeybaha kale duwan ee ku hawlan sugida ammniga dalka Soomaaliya.
Shirkaan looga arrinsanayo habka dhaqaale loogu arruurin karo mashaariicda lagu hormarinta dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Copenhegen ee dalka Denmark ka furmay 29kii bishii Septembar, waxaana kulankaan qaybka yahay dadaallada beesha caalamka ee lagu taageerayo dawladda Soomaaliya.